अन्तर्वार्ता बेलायती सेनामा पुरुष जान दिने, महिलालाई किन रोक्ने? - सेतोपाटी संवाददाता हो, समय सन्दर्भ परिवर्तन भयो। परिवर्तन भएको हो भने त समायनुकूल सन्धी पनि हुनुपर्‍यो नि, परेन र? हिजो पुरुष पठाउन सहमति सन्धी भयो ठिकै छ। हिजो महिला पठाउने सोच थिएन होला। अहिले सोच आयो। तर सोच आउनेबित्तिकै अर्को राष्ट्रको (आफ्नो राष्ट्रको होइन) महिलाहरुलाई त्यसै लैजान पाइन्छ। त्यस्तो हुन सक्छ? विस्तृतमा
राजनीति नामाकरणमा षडयन्त्र गरिए सशक्त आन्दोलन गर्ने निधिको चेतावनी नेहा झा आइतबार जनकपुरधाममा कांग्रेस नगर समितिको नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै निधिले नामाकरण र भाषाको विषयमा टुंगो लगाउन ढिलाई भईरहेको भन्दै षडयन्त्र गरिए कडा प्रतिवाद र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
सरकारी चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी सेतोपाटी संवाददाता
फुटबल तिलोत्तमा गोल्डकपः सुनसरीलाई हराउँदै आयोजक रूपन्देही-११ सेमिफाइनलमा भगवती पाण्डे रूपन्देहीको एन्फा एकेडेमीमा सम्पन्न आइतबार खेलमा निर्धारित समयसम्म दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए। त्यसपछि खेलको निर्णयका लागि ट्राईब्रेकरमा धकेलियो। ट्राईब्रेकरमा पनि दुवै टिमले समान ३-३ गोल गरे।
क्रिकेट मेलबर्न स्टार्स उपविजेतामा सिमित, सन्दीपको किफायती बलिङ सेतोपाटी संवाददाता